Ardayda dugsiyada Sare ee Somaliland oo u fariisatay imtixaanka Shahaadiga - Jowhar Somali news Leader
Home News Ardayda dugsiyada Sare ee Somaliland oo u fariisatay imtixaanka Shahaadiga
Inka badan toban kun oo arday ayaa u fariisatay imtixaanka ee Dugsiga Sare ayaa maanta u fariisatay Imtixaanka Shahaadiga.
Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada iyo Sayniska Somaliland Axmed Maxamed Diiriye ayaa si rasmi ah u daahfuray qaadista imtixaanka.
Wasiirka waxbarashada Axmed Maxamed Diiriye ayaa la hadlay ardayda kahor inta aan loo qaybin warqadaha Imtixaanka lasoo diyaariyay, isaga oo kala hadlay ilaalinta shuruucda iyo xaaladda looga feejignaanayo faafitaanka Cudurka dilaaga ah ee COVID-19.
Shuruudaha lagu galayo waxa uu Ardayda uu la hadlay u sheegay in guud ahaan Gobollada Somaliland ay ka siman yihiin oo aysan jirin Magaalo ama gobol.
Guddiga la dagaalanka Covid-19 ee Somaliland ayaa todobaadkii tagay ku dhawaaqay in la qaaday xaalad iyo Xayiraad waliba oo ka dhalatay cudurka Coronavirus, inkasta oo aan guud ahaan deegannada maamulkaas ka dhamaan Cudurka Covid-19.